Opera 40 yeGnu / linux yave kuwanikwa uye iine VPN inosanganisirwa | Linux Vakapindwa muropa
Opera 40 yeGnu / linux yave kuwanikwa uye iine VPN inosanganisirwa
Chokwadi vazhinji venyu munoziva iyo Opera webhu bhurawuza asi vashoma venyu vanoishandisa chaizvo mazuva ese. Vazhinji venyu munoshandisa Google Chrome uye musasarudze Firefox. Zvakanaka, kwenguva yakati izvo iyo Opera webhu bhurawuza inoshandisa iyo Chromium projekiti webhu injini. Uye mushure mekuvandudzwa kwakati wandei kwakavakirwa paChromium 53, Opera 40 vhezheni yave kuwanikwa nezvimwe zvitsva maficha zvinonakidza zvichienzaniswa nedzimwe shanduro dzeOpera uye kunyange zvichienzaniswa nemamwe mabhurawuza ewebhu.
Pakati pezvinhu izvi zvitsva ibasa idzva reVPN iro richava remahara uye remahara kune vese vashandisi, chimwe chinhu chakashamisa vazhinji vanotarisira yakadaro webhu saiti sevhisi.
Opera 40 inosanganisira sevhisi yeVPN iyo ichave yemahara kune vese vashandisi vayo, chimwe chinhu chakabatanidzwa patsva mubrowser uye icho chisingagumi, ndiko kuti, chinogona kushandiswa kakawanda sezvatinoda uye chiri chemahara, hachizove nemari yekuwedzera. Zvakare Opera 40 inosanganisira an block blocker izvo zvichaita kuti peji kurodha nekukurumidza sezvo unenge uine zvishoma zvinhu zvekutakura. Opera Turbo ichaenderera kuve iripo mune iyi vhezheni yeOpera, basa rinodzora mutoro wekufamba, chimwe chinhu chakanakira kunonoka kana kushomeka kubatana senge mobiles.
Opera 40 inokutendera iwe kushandisa chero chekuwedzera-pane chaunoda asi chatova neVPN basa
ari mawedzero nemapulagini aripowo mune iyi vhezheni yewebhu webhu, chimwe chinhu chinoshamisira zvakakwana chatova nezvinopfuura chiuru zvinhu. Mune maazvino vhezheni ewebhu mabhurawuza, akawanda mabasa ekuverenga akaverengerwa, mune iyi nyaya tinogona kutaura kuti Opera 1.000 inosanganisirawo mamwe mabasa, mune ino kesi inosanganisa nhau izvo zvinotibvumidza isu kuziva iwo azvino mafidha emawebhusaiti atinoda.
Opera 40 ikozvino yave kuwanikwa kune makuru multiplatforms, kunyangwe isiri mune chero yepamutemo repositi parizvino. Chero zvazvingaitika, kurodha pasi kweGnu / Linux mahara uye kunogona kuwanikwa pano.
Opera 40 yakashamisa vazhinji, senge shanduro dzekare idzo zvishoma nezvishoma dzinosanganisira mabasa matsva, asi ichokwadi kuti Opera semamwe mabhurawuza haasati ave akakurumbira seChannel kana Firefox, asi Opera 40 ichave iyo inogona kushandura zvinhu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Opera 40 yeGnu / linux yave kuwanikwa uye iine VPN inosanganisirwa
Chinhu cheVPN ipfumo rinocheka nekwose ... chinofanirwa kuchengetedza kuvanzika kwedu, kuvanza IP yedu chaiyo… asi traffic yese inoenda ku "server yavo". Ivo vanoitei neruzivo rwedu rwese? Tinoda kufunga kuti hapana, asi chiitiko zvakare chinondiudza: Kana chigadzirwa chiri chemahara, iwe ndiwe chigadzirwa !!! tora yako mhedziso.
Pindura kune zvakati nezvakati